Nayakhabar.com: रुद्राक्षबाटै लखपति, तीनवटा रुद्राक्षको मूल्य साढे ४३ लाख !
रुद्राक्षबाटै लखपति, तीनवटा रुद्राक्षको मूल्य साढे ४३ लाख !
संखुवासभा । रुद्राक्ष उत्पादनको मध्य समयमा यसै साता मात्र तीन वटा बहुमुल्य रुद्राक्ष बिक्री भयो । आजसम्मकै उत्कृष्ट २१ मुखे मुखद्धार तीन वटा रुद्राक्ष ४३ लाख ५० हजारमा खरिदबिक्री भएको छ ।
रुद्राक्ष व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिपिन राईका अनुसार यो बर्ष धेरैमुख भएका महँगा दाना तीन वटा बजारमा आएको र केही गुपचुपमा खरिद बिक्री भएको बताए । बिक्री भएका रुद्राक्ष षडानन्द नगरपालिकाको केउरेनीपानीमा उत्पादन भएको २१ मुखे रुद्राक्ष व्यपारी निलमणी न्यौपाने लगायतले १५ लाख ५० हजारमा खरिद गर्‌यो । यता धुपुको ज्यामिरेमा १५ दिन अघि उत्पादन भएको २१ मुखे रुद्राक्ष व्यपारी सुजन राई,नरेन्द्र राई लगायतले १६ लाखमा खरिद गरेको छ ।
यसै सातामात्र भोजपुरको फालिकोटमा उत्पादन भएको २१ मुखे रुद्राक्ष सानो आकारको भएको भन्दै १२ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको व्यपारी चित्र श्रेष्ठले बताए । यता स्याबुनका मानसिंह राईले एक लाख २० हजारमा १७ मुखे रुद्राक्ष बिक्री गरे । यि मुख्य बहुमुल्य रुद्राक्ष मात्र खरिद बिक्री भएको हो ।
बाँकी २०,१९,१८,१७ लगायतका रुद्राक्ष भने तीन करोड भन्दाबढीको खरिद बिक्री भई सकेको संघका अध्यक्ष राईले बताए । ठूला मुख भएका रुद्राक्ष बिषेश भारतका बजारमा माग हुने गरेको व्यापारीहरुको भनाई छ । साना मुख गरेका चार, पाँच , छ र सात मुखे रुद्राक्ष चिल्लो, थेप्चो, मदाने र ठुलो कण्ठे रुद्राक्ष चीनको बजारमा बढी माग भएकाले खरिद बिक्री दैनिक रुपमा बढ्दै गएको छ ।